Beats စျေး - အွန်လိုင်း XBTS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Beats (XBTS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Beats (XBTS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Beats ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $37 917.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Beats တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Beats များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BeatsXBTS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0371BeatsXBTS သို့ ယူရိုEUR€0.0313BeatsXBTS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0283BeatsXBTS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0337BeatsXBTS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.33BeatsXBTS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.233BeatsXBTS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.818BeatsXBTS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.138BeatsXBTS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0491BeatsXBTS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0517BeatsXBTS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.816BeatsXBTS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.287BeatsXBTS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.199BeatsXBTS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.78BeatsXBTS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.26BeatsXBTS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0508BeatsXBTS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0566BeatsXBTS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.15BeatsXBTS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.258BeatsXBTS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.95BeatsXBTS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩44BeatsXBTS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦14.32BeatsXBTS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.71BeatsXBTS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.01
BeatsXBTS သို့ BitcoinBTC0.000003 BeatsXBTS သို့ EthereumETH0.0001 BeatsXBTS သို့ LitecoinLTC0.000682 BeatsXBTS သို့ DigitalCashDASH0.000409 BeatsXBTS သို့ MoneroXMR0.000416 BeatsXBTS သို့ NxtNXT2.89 BeatsXBTS သို့ Ethereum ClassicETC0.00547 BeatsXBTS သို့ DogecoinDOGE10.7 BeatsXBTS သို့ ZCashZEC0.00045 BeatsXBTS သို့ BitsharesBTS1.14 BeatsXBTS သို့ DigiByteDGB1.19 BeatsXBTS သို့ RippleXRP0.132 BeatsXBTS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00128 BeatsXBTS သို့ PeerCoinPPC0.123 BeatsXBTS သို့ CraigsCoinCRAIG16.9 BeatsXBTS သို့ BitstakeXBS1.58 BeatsXBTS သို့ PayCoinXPY0.647 BeatsXBTS သို့ ProsperCoinPRC4.65 BeatsXBTS သို့ YbCoinYBC0.00002 BeatsXBTS သို့ DarkKushDANK11.9 BeatsXBTS သို့ GiveCoinGIVE80.32 BeatsXBTS သို့ KoboCoinKOBO8.45 BeatsXBTS သို့ DarkTokenDT0.0342 BeatsXBTS သို့ CETUS CoinCETI107.11